Barcelona Oo Shaacisay Heshiis SHAN Sannadood Ah Oo Ay La Gaadhay Weeraryahan Halis Ah Oo Orod, Goysmo Iyo Dhalin Isku Darsaday - Gool24.Net
Barcelona ayaa shaacisay in heshiis saddex sannadood ah ay la gaadhay da’yarka kooxda kubadda cagta Sao Pualo ee Gustavo Maia, kaas oo ay qandaraaskiisa ku xidhay lacag wareer ah oo kooxda soo dalbataa ay bixin doonto muddada uu joogo Camp Nou.
Gustavo Maia oo ay da’diisu tahay 19 jir ayaa ka ciyaara afka hore ee weerarka, waxaanay Barcelona si toos ah ugu diri doontaa kooxdeeda heerka labaad oo uu ku qaadan doono xili ciyaareedka soo socda si uu khibrad usoo helo ka hor inta aan lasoo dallacsiin.
Barcelona waxay sheegtay inuu laacibkan reer Brazil u saxeexay heshiis shan sannadood ah oo uu ku xidhan yahay qiime lacageed oo dhan €300 milyan oo Gini oo lagu burburin karayo.
War-saxaafadeed ay kooxdu soo saartay oo lagu baahiyey websitekeeda rasmiga ah ayaa waxay Barcelona ku tidhi: “Barcelona waxay heshiis la gaadhay kooxda Sao Paulo oo ay kala soo saxeexatay Gustavo Maia oo ku biiri doona Barca B.
“Laacibka reer Brazil wuxuu saxeexay qandaraas soconaya illaa June 30,2025, kaas oo lagu buruin karayo €300 milyan oo Euro. Isu-geynta kharashka kaga baxay kooxdu waa 4.5 milyan Euro.”
Barcelona waxa kale oo ay sii faahfaahisay ciyaartoydan da’da yar ee ay lasoo saxeexatay, waxaanay war-saxaafadeedka ku tidhi: “Gustavo Maia waa 19 jir ku biiray Sao Paulo isaga oo 14 jir ah. Kaddib saddex isku day oo ay kooxdu samaysay, waxay keentay kulliyaddeeda, illaa markaana wuxuu u dhaliyey goolal iyo isaga oo kula guuleystay toddoba koob oo heer walba leh. Xili ciyaareedkiisii ugu wanaagsanaa wuxuu ahaa 2018 oo uu dhaliyey 30 gool, 36 ciyaarood oo uu dheelay.
“Waxa uu u ciyaaray xulka qaranka Brazil ee 16 jirrada iyo 17 jirrada, waa weeraryahan dheereeya oo inta badan ka ciyaara garabka bidix inkasta oo uu yahay midigle.
“Wuxuu sii waday inuu u ciyaaro kooxda labaad ee Sao Pualo, xataa markii loogu yeedhay kooxda waaweynka. Wuxuu leeyahay farsamo goyesmo oo xooggan, laag awood badan, waxaanu ka muuqday tartanka qaramada Latin America ee da’yarta.”
Barcelona ayaa la wariyey in bishii July ay sii samaysay heshiiska Maia, iyadoo €1 milyan oo Euro oo hormaris ah siisay Sao Paulo si ay damaanad ugu hesho iibka weeraryahankan.
Laacibkan ayaa tababarka la bilaabay Arena Cortinhians sannadkan, waxaanu nasiib u yeeshay inuu ka garab shaqeeyo Dani Alves, Alexandre Pato iyo Hernandes.
Maia ayaa noqonaya ciyaartoygii labaad ee Sao Paulo ka tirsan ee horyaalka Spain ee LaLiga yimaadda sannadkan, waxaana ka horreeyey kubbad-sameeyaha Reinier oo Real Madrid ay bishii January kusoo iibsatay €35 milyan oo Euro.